Nohamafisin’ny governemanta amerikana ny fanaovana ankivy ara-diplaomatika ny Lalao Olaimpika Ririnina 2022 any Beijing · Global Voices teny Malagasy
Tsy raharahan'i Shina izay ankivin’i Etazonia, hoy i Beijing
Voadika ny 27 Desambra 2021 19:23 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Esperanto , Ελληνικά, English
(Lahatsoratra tamin'ny 7 desambra 2021)
Hetsika manohitra ny Lalao Olaimpika Ririnina Beijing 2022 tany Soisa tamin'ny 23 Jona 2021. Pikantsary avy amin'ny No Comment TV.
Nanambara ny fanaovana ankivy ara-diplaomatika ny Lalao Olaimpika Ririnina 2022 any Beijing tamin'ny 6 Desambra ny governemanta amerikana, nilaza ny ahiahiny momba ny “fanitsakitsahana goavana ny zon'olombelona sy ny habibiana mahatsiravina ao Xinjiang.” Manondro ny Fandripahana ny Uyghur sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona natrehin'ny vondrom-piarahamonina Uyghur tao Shina ny fanambarana.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety ny sekretera mpampita vaovaon'ny Trano Fotsy Jen Psaki fa tsy handray anjara amin'ny “fanentanana” amin'ny Lalao Olaimpika ny fitantanan-draharahan’i Etazonia. Tsy misy delegasiona ofisialin'i Etazonia hanatrika ny Lalao 2022, fa tsy toy ny fanaovana ankivy tanteraka tamin'ny Lalao Olaimpika Moskoa tamin'ny 1980 nanohitra ny fanafihan'ny Sovietika an'i Afghanistan anefa izany fa avela handray anjara amin'ity lalao ity ny atleta amerikana.
Nanambara tamin'ny volana lasa teo ny filoha amerikana Joe Biden fa mihevitra ny hanao ankivy ara-diplaomatika ny Lalao Olaimpika Ririnina izy. Tamin'ny herinandro lasa, nanambara i Litoania fa tsy handefa delegasiona ofisialy any Beijing izy ary antenaina fa hisy firenena maro kokoa, anisan'izany i Canada, no hanatevin-daharana ny ankivy ara-diplaomatika.
Ny andro nialoha ny fanambarana, nilaza ny mpitondratenin'i Shina, Lijian Zhao fa handray “fanapahan-kevitra henjana” i Shina raha hisafidy ny hanao ankivy ny Lalao Olaimpika i Etazonia.
Tokony hanaraka ny toe-tsaina “miaraka” #Olaimpika i Etazonia ary tsy hampiditra ny resaka politika amin’ny fanatanjahantena sy ny fanaovana ankivy ara-diplaomatika #Beijing2022, sao hisy fiantraikany amin'ny fifanakalozan-dresaka sy fiaraha-miasa amin'i Shina sy Etazonia amin'ny sehatra lehibe izany. Handray fepetra hentitra i #Shina raha toa ka diso fanapahan-kevitra i Etazonia. pic.twitter.com/xnDBIDzGer
Hatreto, tsy mbola nisy fepetra henjana mivaingana nambaran'i Beijing. Naneso ny kabary politika masiaka nataon'i Shina i Solomon Yue, mpikatroka Shinoa-Amerikana Repoblikana sady Tale Jeneralin'ny vondrona mpanao tsindry Repoblikana any ivelany:
Inona ilay fanapahan-kevitra fanoherana? TSY handefa mpianatra Shinoa ho any Amerika? Manala ny Ivotoerana Confucius 36 sisa any Amerika? Manakatona ny CGTN any Amerika? Alefa, mampihomehy ahy!
Indeed, after the Biden administration made its official announcement, Liu Pengyu, the spokesperson of the Chinese Embassy in the US abandoned threats of countermeasures and called the boycott “political posturing.”
Ankoatra izay, rehefa avy nanao ny fanambarana ofisialy ny fitantanan’i Biden, niala tamin’ny fanapahan-kevitra famaliana henjana sy nilaza ny fanaovana ankivy ho “fomba fanaovana politika” i Liu Pengyu, mpitondratenin'ny Masoivoho Shinoa ao Etazonia.
Manao izany ho an'ny tombontsoany sy ny fomba fanaovany politika manokana ny mpanao politika miantso ny fanaovana ankivy ny #2022BeijingOlympics. Raha ny marina, tsy misy miraharaha na ho avy na tsia ireo olona ireo, ary tsy misy fiantraikany amin'ny #Beijing2022 izay hotontosaina soa aman-tsara izany.
Nandeha lavidavitra kokoa i Hu Xijin, lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Global Times vatsian'ny fanjakana Shinoa ary nanoro hevitra fa tsy handray an-tanan-droa ny manampahefana amerikana ihany i Beijing:
Ny olona mihevi-tena ho tena fanta-bahoaka ihany no hihevitra ny tsy fahatongavan’izy ireo ho tena ankivy mahery vaika. Mifandray akaiky amin'ireo mararin’ny COVID-19 ny ankamaroan'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta amerikana araka ny fenitra arahin’ny Shina, ka izany no mahatonga azy ireo ho sarotiny sy tia sehoseho. Ianareo no olona tsy tian'ny mponin'i Beijing ho hita. https://t.co/jMrrmBHr8G
Nandritra izany fotoana izany, nilaza ny sasany fa tsy lasa lavitra loatra ny fanaovana ankivy ara-diplaomatika, tamin'ny filazàna fa tokony hosakanana tsy hanatrika ny lalao any Shina ireo atleta amerikana. Nitaky fandraisana andraikitra bebe kokoa manoloana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Shina ny fikambanana hafa izay niaro ny fanaovana ankivy ny Lalao Olaimpika Ririnina. Hoy i Sophie Richard, talen'ny Human Rights Watch ao Shina hoe:
2/2: Tsy tokony ho io ihany anefa no fanapahan-kevitra ho raisina. Tokony hampitombo avo roa heny ny ezaka ataony miaraka amin'ny governemanta mitovy hevitra aminy i Etazonia amin'izao fotoana izao amin'ny fanadihadiana sy fanokafana ny lalana ho amin'ny tamberina andraikitra manoloana ireo tompon'andraikitra amin'ireny heloka bevava ireny sy ny rariny ho an'ireo niangana. https://t.co/zO3GgI8P54 @hrw @hrw_chinese
Raha toa nanizingizina ny hanao ankivy tanteraka ny sasany, toa ny mpanao politika amerikana Tom Cotton sy Carlos Gimenez, liana kokoa amin'ny fandinihana ny fihetsiky ny atleta tsirairay ao Beijing mandritra ny Lalao kosa i Jerome Cohen, mpampianatra lalàna ao amin'ny Oniversiten'i New York satria maro ireo kintana ara-panatanjahantena no niteny nanohitra ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tao Shina tao anatin'ny roa taona farany:
Mahaliana izao ny mijery ny fomba fihetsik'ireo atleta amerikana mandray anjara. Hisy ve ny handray anjara amin'ny fihetsiketsehana momba ny zon'olombelona? Amin'ny fomba ahoana? Rahoviana? Mba hanohanana izany, iza amin'ireo antony maro no mitaky ny fihetsiketsehana? Tena fanamby ho an'ny tanora. https://t.co/EDwcbED0g4